Andian-drano mitete FAQ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Mila sivana ve aho amin'ny fanondrahana rano mitete?
Ie. rehetra mila rafitra fanondrahana rano manana a sivana. Na madio toy inona aza ny rano, a sivana fiantohana mora vidy hiambenana amin'ny fako miditra ao aminao rafitra fanondrahana. Na ny sombintsombiny kely ao anaty rano aza dia mety hiteraka mitete emitter mba ho voahitsoka.
Iza amin'ny làlan'ny marika no miatrika ny marika rehefa mametraka?
Atreho, mba hiatrika ny lalan-drano hisorohana ny fotaka sy fasika ary ahidratsy tsy hiditra.
Mila manafosafo ny rafiko ve aho aorian'ny zezika?
foana maoderina ny rafitra aorian'ny zezika mitazona tsara ny rafitra fanondrahana. Zava-dehibe indrindra izany rehefa mampiasa organika zezika.
Ahoana no fomba famafana ny rafitra fanondrahana rano mitete?
kabone ny RAFITRA miaraka amin'ny rano madio toy izao: maoderina ny mainlines aloha, avy eo ny tsipika marolafy ary farany ny mitete tsipika amin'ny fanokafana tsipika maromaro isaky ny mandeha (ohatra: tsipika folo) mba hitazomana ny tsindry ampy hatanjaka maoderina. kabone ny tsipika mandritra ny 1 minitra na mandra-pahazavan'ny rano.
Inona no maha samy hafa ny drip drip sy ny tsipika mitete?
Tsipika mitete dia mitovy amin'ny mitete kasety satria manana emitters ny tahan'ny famoahana isan-karazany napetraka amin'ny elanelam-potoana maharitra, na izany aza mijanona eo ny fitoviana. Tsy toy ny mitete kasety, tsipika mitete dia voafetra ny halavany mitovy amin'ny fetran'ny fantsona poloney mitovy habe aminy
Ahoana ny fikajiana ny onja fanondrahana rano mitete？
(1)Ampitomboy ny isan'ny mpampita amin'ny GPH hahazoana ny totalinao fanondrahana mitete tahan'ny mikoriana, raha toa ka mitovy ny tahan'ny GPH ny emiteranao rehetra.
(2)Ohatra, raha manana emiter 20 ianao izay manana tahan'ny 2 GPH daholo, dia totalinao fanondrahana mitete ny tahan'ny mikoriana dia 40 GPH (20 emitters x 2 GPH = 40 total GPH).
Miakatra sa midina ve ireo mpampita horonam-peo?
Na inona na inona fomba safidinao hametrahana ny mitete kasety azafady mba alao antoka ny emitters tarehy ny. Izany dia mampihena ny fanakanana ateraky ny fitsentsenana ny loto sy ny fako amin'ny fanidianamidina. Matetika manarona ny scotch miaraka amin'ny tany na mulch vitsivitsy monja dia tena manampy.
Hafiriana no maharitra mitete?
Hafiriana ny Drip Tape no farany? 8-mil mitete kasety ampiasaina indray mandeha ary ariana. 10-mil scotch amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny tany be vato na fambolena volo. 15-tapitrisa scotch matetika dia tsara mandritra ny 3-5 taona toy ny ela satria mandeha tsara ny sivana sy ny mpandrindra.
Azoko atao ve ny mampiasa indray mitete?
Raha tsy mitombo mandavantaona ao amin'ny zaridaina ianao afaka mampiasa indray ny scotch amin'ny vanim-potoana fitomboana manaraka. Ataovy izay hamafana ny fittings rehetra ary esory tsara ny tany sy ny grit amin'ny voanjo sy barb manodidina mba hiasa tsara izy ireo amin'ny fotoana ampiasanao azy ireo.
Azo alevina ve ny kasety mitete?
Tetezo mitete ho Niara-nalevina hatramin'ny enina santimetatra ny halalin'ny tany. Matetika izy no mandevina ny azy scotch manodidina ny telo ka hatramin'ny efatra santimetatra ny halalin'ny tany.
Ahoana no ahafahanao manala ny rakotra mitete?
Vohay ny vavahady vavahady amin'ny loharano misy rano na rehefa mampiasa paompin-drano dia ampodio ny paompy ary alefaso ny fitarihan-drano rafitra mandritra ny adiny iray farafahakeliny. Izany dia hiantohana ny vahaolana amin'ny rano-asidra entina ao amin'ny rafitra amin'ny alalàn'ny làlam-pitenenana ary izany dia hamafana ireo fananganana bakteria ao anatin'ny rafitra.
Voasakana ve ny tsipika mitete?
Mampalahelo fa ny fantsona ao amin'ny mitete rafitra mety ho clogged amin'ny alàlan'ny fananganana mineraly na bakteria. Fanosehana ny RAFITRA miaraka amin'ny rano farafahakeliny in-3 isan-taona afaka esory ny sakana kely kokoa ary araraoty ny sakana tsy hamorona amin'ny voalohany. Raha ny RAFITRA dia tampina tokoa, mety ilaina ny flush asidra
Ahoana no fomba tsy ahafahako manentsina ny rafitra fanondrahana?
1.Hamarino tsara aloha fa mihodina ilay famafazana RAFITRA hialana amin'ny tranga.
2.Manaraka izany dia mila manala ireo nozoro sy loha loha hafafazana daholo ianao.
3.Avy eo, atodiho ny rano dia avelao hihodina izy mandra-pivoakan'ny rano isaky ny lohan'ny loha mba hamoahana ny fako ao anaty famafazana Systems
Inona no maha samy hafa ny dripline sy ny drip tape?
Iza no tsipika mitete tsara na tsipika mitete?
Rehefa ilaina ny halavany lava, toy ny fambolena na ny fangatahana trano maharitra, mitete kasety matetika no vahaolana. Tetezo mitete dia matetika ampiasaina amin'ny fampiharana tsindry ambany, miasa tsara indrindra amin'ny 8-15 PSI. raha mitete kasety azo ampiasaina amin'ny halavany lava kokoa noho ny tubing poly sy tsipika mitete, tsy hoe tsy misy fetra tanteraka izany